Vista Recovery Barzakh - Ladnaansho qoruhu lumay ka Windows Vista
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado qoruhu ku Vista
Waxaan ahay isagoo buug IBM ah kuwaas oo Vista guriga aasaasiga ah pre-rakibay. Isticmaalka maamulka disk Vista, waxaan ka dhigay xijaab on my HDD. Ka dib markii socda muddo ku dhow 6 bilood. daaqadaha aan helay qaar ka mid ah dhibaato ay sabab u lahaa in uu ordo kabashada disk. Ka dib markii socda kabashada disk, inkastoo OS loogu soo celin asalka ah, laakiin aan D: maqan yahay. Its muujinaya kaliya c: haatan i. Waxa aan calaamadeeyay in BIOS sidoo kale. Waxaan hubin in waxa uu ku biireen labada drives haddii ay sidaas tahay ma ihi. Maxaa ku saabsan macluumaadka aan.
Yopu fadlan soo jeedin kartaa wixii aad samayn lahayd.
Waxaa laga yaabaa in laba nooc oo ah xaaladaha D ah: waxaa lagu tirtiro si ay u noqdaan meel unallocated ku wadid aad u adag, ama D: ahaa darsadeen aad C: drive, laakiin aan xogta ku teedsan, meel kaliya ku biireen. Sida ay u Risaalo ka, waxa aan jeclaan xogta hal ama dukumeenti, oo waa u fududahay in la overwritten by xog cusub ama hawlaha ka dib. Risaalo laga heli karaa xitaa laga badiyay waqti dheer ka hor. Under xaaladan, oo leh soo kabashada xijaab u Windows Vista , waxaad si fudud aan dib ugu heli karaa Risaalo ka maqan, iyo kulli xogta lagu kaydiyaa it on.
Sida loo sameeyo dib u soo kabashada ah xijaab Windows Vista?
The kabashada xijaab Vista aad u baahan tahay: Wondershare Data Recovery
Vista ka sokow, waxaa sidoo kale dib u soo kabashada xijaab waxaa loo isticmaali kartaa Windows 7 iyo XP. Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad free hoose si scan u qoruhu aad laga badiyay iyo hubiyo xogta lagu kaydiyaa iyaga ku hor intaadan bixin.
Haddii aad tahay user Mac ah, fadlan tag kabashada xijaab Mac .
Halkan ha u fuliyaan kabashada xijaab in Windows Vista la tallaabooyinka faahfaahsan.
Ku rakib oo ay maamulaan this Vista kabashada xijaab on your computer. Waxaa jira laba hababka soo kabashada: Wizard iyo Standard Mode. Wizard waa default ka mid ah, taas oo ka dhigaysa in aad sii wado ay ka jawaabidda su'aalaha dhowr ah. Haddii aadan rabin in hab-kabashada, waxaad bedelan kartaa in Standard Mode ah, taas oo idin Toosiya si ay u qabtaan shaqada la fursadaha kabashada kala duwan. Interface ugu weyn ee labada hababka waa sida soo socota.
Labada Standard Mode iyo Wizard waa arrin fudud in ay ku shaqeeyaan. Halkan aynu horay ula Wizard ah, oo waxaad tagtaan dalka "Next".
Step2. noocyada file xulo u soo kabashada
Haddii aad rabto oo kaliya in ay dib u hesho files muhiim ah ka qoruhu lumay, waxaad sameyn kartaa nooca faylka halkan si aad u xirtid file bartilmaameedka u scan iyo soo kabashada, oo waxaad badbaadin doontaa waqti badan. Dabcan, waxa kale oo aad dooran kartaa "Dhammaan files" in ay iyaga oo dhan ka heli.
Step3. Dooro kabashada xijaab
Next aad dooranayso meesha aad badiyay xogta si aad u iskaan. Si aad u hesho xijaab lumay, ma jirto meel sax ah wax ka badan ayaa la doortay, waayo. Fadlan u sheeg ka soo kabashada xijaab Vista in "Anigu ma heli karo maqaal qoruhu aan" si aynu u heli qoruhu aad laga badiyay marka hore, ka dibna uu horay u socdo.
Step4. dooro drive jirka lagu sawiro
Halkan ka dooro drive in adiga kugu saabsan si ay u iskaan Risaalo ka lumay yihiin. Waxay noqon kartaa drive adag of your computer ama drive dibadda adag. Markaasuu ku dhacay "Next 'si ay u bilaabaan baaritaan ku.
Step5. Dooro xijaab u soo kabashada
Ka dib markii baaritaan disk ka dhameystiray, oo dhan laga badiyay iyo qoruhu recoverable waxaa la helay iyo ku qoran natiijada iskaanka ah. Waxaad dooran kartaa mid ka mid ah kuwa la soo baxa si ay u sii wadaan xog dheeraad ah iskaan ku yaal. Magacyada asalka parition yihiin ma ay xajin, oo waxaad ku tidhaahdaa karaa baaxadda.
Step6. Kabsado files xijaab
FIIRO GAAR AH: Haddii aad weli xusuusan magaca files muhiim ah, waxaad ka raadin kartaa magaca in bar filter in ay si deg deg ah ka cutub file ka hesho. Ama waxaad isticmaali kartaa "Filter" si ay u dejiyaan taariikhda la abuurayo ee faylka si ay u group xulashada fiican. Si kastaba, doorato habka ugu wanaagsan oo aad iyo aad jeceshahay.